धन कमाउने सपना (गजल संग्रह) | आरोह अवरोह.....
धन कमाउने सपना (गजल संग्रह)
Posted on Wednesday, January 19, 2011 No Comments
मेरो बाल्यकाल देखिको कुनै एउटा किताब निकाल्ने सपना अव केहि महिना पछि पूरा हुने भएको छ । सयादै मार्च महिनाको दोस्रो हप्तामा मेरो गजल संग्रह "धन कमाउने सपना" बिमोचन गर्ने तयारीमा अहिले रातदिन लागिरहेको छु । त्यसैले ब्लगमा केहि नयाँकुरा लेख्न समय मिलिरहेको छैन ।
यो गजल संग्रहको लागि मेरा गजलहरु सबै तयार भैसकेका छन भने अहिले टाईपिंग कार्य र सम्पादनको कार्य भैरहेकोछ । सम्पादन कार्य सकी प्रकाशनको सम्पूर्ण तयारी भए पश्चात बिमोचनको मिति तय गर्नेछु । बिमोचनमा चाहि सबै मित्रहरु आइदिनुहुन को लागि अनुरोध गर्दछु । बिमोचनको मिति अनि स्थानको बारेमा केहि दिन पछि फेरी लेख्ने बचा गर्दछु ।
यस गजल संग्रहमा ७६ वटा मेरा बिदेशी पीड़ा ,देशप्रेम र माया प्रेमका गजलहरु रहनेछ्न भने कभर भने अहिले देखिराख्नु भएको फोटोलाई राख्ने बिचार गरेको छु । तपाईहरुको बिचारमा कस्तो होला यो फोटो कभरको लागि ? अनि कस्तो छ संग्रहको शीर्षक? प्रतिक्रिया लेखिदिनु भए म आभारी हुन्थेंकी ?